Xarunta Dhaqanka ‘ Cilmibaarista iyo Akhriska ee Awjaamac oo Daahfurtay Barnaamij Da’yarta loogu Gudbinayo Taariikhda Soomaaliya”Sawirro” – Radio Muqdisho
Kulankan oo lagu daahfurayey barnaamij loogu magac daray isu xirka dhalinyarada iyo dadka waawayn oo bishiiba mar la qaban doono ayaa waxaa soo qaban qaabisay xarunta dhaqanka’ cilmibaarista iyo akhriska ee Awjaamac cumar ciise, xaafada islii ee Magaalada Nairobi.
Barnaamijkan ayaa waxaa looga golleeyahay sidii ay da,yarta soo koraysa uga dhaxli lahaayeen dadka waawayn taariikhda iyo waayo aragnimada ku duugan.
Waxaana todobaadkan daahfuray barnaamijkan qoraa Daahir Cali Cumar Oo Xiligii dawladii Dhexe Mar Soo Noqday Agaasimihii Guud ee akadeeemiyadda cilmiga iyo fanka, isagoo waxbadan uga faa,iideeyey da,yartii kasoo qaybgashay furitaanka barnaamijkan Muhiimahada afka hooyo iyo waliba Taariikhda iyo Juquraafiga Soomaaliya .
Qaarkamida Waalidiintii carruurtooda keenay furitaanka barnaamijkan oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay inay rajaynayaan inay ubadkoodu barnaamijkan ka dhaxli doonaan Barashada taariikhda faca wayn ee soomaaliya .
Dhanka kale Qaar kamida carruurtii Barnaamijka ka soo qayb gashay oo badankood ay ku adkay ku hadalka luuqada Soomaaliga ayaa sheegay in ay ka faa’iideen barnaamijkan iyagoo intooda badan aad ula dhacsanaa sheekooyin ay kamid ahaayeen Wiil Waal, Cigaal shiidaad Dhagdheer oo looga sheekeeyey.
FAAHFAAHIN: Madaxweynaha iyo madaxda gobolladu maxay ka yiraahdeen shirkii Garowe?